Lolane Head Up Gel Gum 75g
Spiky Look The gel is suitable for short hair. Set of hair.
Lolane Head Up Gel Gum
Restylable Hardness Level5Shine Level 5
၁. ဈေးဝယ်သူဘက်မှ ဝယ်ပြီးသားကုန်ပစ္စည်းများကို စိတ်တိုင်းမကျသောကြောင့် ပြန်လည်လှယ်လှဲချင်၍သော်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းပြန်ပေး ငွေပြန်အမ်းချင်၍သော်လည်းကောင်း၊ ယင်းကိစ္စအရပ်ရပ်များကို (၇) ရက်အတွင်း စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂. လူကြီးမင်းသည် မြို့ ပြင်မှာနေထိုင်မည်ဆိုလျှင် ပစ္စည်းပို့သမား၏အခက်အခဲများကြောင့် လူကြီးမင်းမှာယူသောကုန်ပစ္စည်းများကို အိမ်အရောက် ပို့ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၃. လူကြီးမင်း အမှန်တကယ် ဝယ်ယူလိုသည့် ပစ္စည်းများကိုသာ ဝယ်ယူပါရန်။ အကယ်၍ မှာယူပြီး ပစ္စည်းပြန်လှဲချင်တယ်ဆိုရင် ပို့ခများကို လူကြီးမင်းဘက်ကသာ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်လည်းကုန်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အမှန်တကယ် ဝယ်ယူလိုသည့် ပစ္စည်းများကို သေချာ ရွေးချယ်ကာ ဝယ်ယူအားပေးပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ dinion Online Shopping Website ထဲတွင် ရှိသော "ပစ္စည်းပြန်အမ်း အချက်အလက်" များကိုလည်း ဖတ်ရှုပေးပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
၄. ဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် ပစ္စည်း၏အာမခံထားသည့်အချိန်အတွင်း ယင်းပစ္စည်းသည် တစ်စုံတစ်ရာ ချို့ ယွင်းမှု ရှိပါက နှင့် လူကြီးမင်းဘက်မှ ပစ္စည်းကို ပြန်ပို့ပြီး စစ်ဆေးစေလိုလျှင် ဤပို့ခကို လူကြီးမင်းဘက်ကသာ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅. dinidon Online Shopping Website မှ ပစ္စည်းများ မှာယူသည့်အခါတွင် အောက်ပါ ငွေပေးချေစနစ်များဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ - WeChat ငွေပေးချေစနစ်၊ PayPal ငွေပေးချေစနစ်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ စီဘီဘဏ်၊ OK $ Dollar နှင့် အခြားသောငွေပေးချေစနစ်များအားအသုံးပြု၍ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ ငွေပေးချေသည့်အခါတွင် လူကြီးမင်းဘက်မှ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက dinidon ကို ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းတိုင်ပင်နိုင်ကြောင်း ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
၆. ယင်းကုန်ပစ္စည်းများသည် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ တင်ပို့ကာ ရောင်းချရသောကြောင့် ပစ္စည်းပို့ပေးသည့်အခါတွင် ရက်အနည်းငယ်မျှကြာရှည်မည်ကို လူကြီးမင်းတို့ဘက်မှ စ်ိတ်ရှည် နားလည်သဘောပေါက်စေလိုပါသည်။ dinidon ဘက်မှ တစ်စုံတစ်ရာကို အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်စေ၊ လူကြီးမင်းဘက်မှ တစ်စုံတစ်ရာအသိပေးချင်သည်ဖြစ်စေ Gmail သော်လည်းကောင်း၊ dinidon Website ထဲရှိ Messenger Box တွင်သော်လည်းကောင်း အကြောင်းကြားပေးပါမည် နှင့် အကြောင်းကြားပေးပါရန် လေးစွားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ ဤသို့အကြောင်းပေးသည့်အချိန်တွင်လည်း လူကြီးမင်းဘက်မှ ကြည့်ရှုပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ရာ သိရှိလို၍ မေးမြန်းလိုသည်ဆိုပါကလည်း ရုံးချိန်အတွင်းမေးမြန်းပေးပါရန် တဖန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
၇. ဝယ်ယူအားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါကြောင်း။